Samachar Batika || News from Nepal » केटी मान्छे निहुरिदा उनको के देखिन्छ ? ज्योति मगरको आयो कडा जवाफ
केटी मान्छे निहुरिदा उनको के देखिन्छ ? ज्योति मगरको आयो कडा जवाफ
चर्चित गायिका तथा ह’ट मोडल ज्योति मगरलाइ नचिन्ने सायद कोई नहोलान । गायिका मोडल ज्योति मगर खुबै चर्चामा रहेकी छिन । स्टेज कार्यक्रम देखि गीत संगीतमा उनको माग खुबै बढेको छ । ज्योतिले लगायको कपडाको हाउ भाऊलाई के नराम्रो भन्ने हो त । उनी ज्योतिले नेपाली बाजारमा सबै दर्शकको मन जितेकी छिन।
चर्चित गायिका ज्योति मगर रमाईलोको मामलामा निकै अगाडी छिन । सबै संग रमाइलो पारामा बोल्ने ज्योति लाई कसै कसैले गलत व्याख्या गरेपनि उनलाई धेरैले राम्रो मन भएको मोडल तथा गायिका को रुपमा लिन्छन । उनि जो संग पनि खुलेर बोल्छिन र कलाकार हु भनेर कहिल्लै घमण्ड देखाउदिनन ।
उनको अन्तर्वार्ताको भिडियो हरु यूट्युबमा प्रसस्त भेट्न सकिन्छ । खुल्ला मनले अन्तरबार्ता दिने ज्योतिको भिडियो हरु निकै चाख मानेर हेर्ने गर्दछन । उनले अन्तर्वार्ता दिएको प्राय भिडियो हरु 10 लाख भ्यूज पार गरेका हुन्छन । तिनै भिडियो हरु मध्ये आज हामीले डबल मिनिंग अर्थात दोहोरो अर्थ लाग्ने एउटा यूट्युब कार्यक्रमको भिडियो उठाएर ल्याएका छौं ।
यूट्युब भिडियो मार्फत सहयोगको अपिल गर्दै दर्जनौं गरिब दुखीको सेवा गर्दै आईरहेका गायक तथा यूट्युबर शिशिर भण्डारी को यूट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपालको डबल मिनिंग कार्यक्रम मा रमाईलो कुराकानी गरिएको छ । ज्योतिको यो भिडियोलाई यूट्युब मा यो समाचार तयार पर्दा सम्म २७ लाख भन्दा धेरैले हेरिसकेका छन् ।
यूट्युबमा लोकप्रिय रहेको उक्त भिडियोमा कार्यक्रम संचालक शिशिरले ज्योतिलाई थुप्रै डबल मिनिंग प्रश्नहरु सोधेका छन् जसको जवास ज्योतिले सहज तरिकाले रमाईलो पारामा जवाफ दिएकि छिन ।
प्रकाशित मिति २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार १६:५०